I-Android 12 inokubonisa imeko ye-hibernation yeeapps ezingasetyenziswanga
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 12 inokubonisa imeko ye-hibernation yeeapps ezingasetyenziswanga
UHLAZIYO:I-beta yokuqala ye-Android 12 isemthethweni. Funda konke esikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga Umhla wokukhutshwa kwe-Android 12 kunye neempawu ezintsha.
Inkqubo ye- umboniso wokuqala wonjiniyela we-Android 12 kusenokwenzeka ukuba isondele: kubonakala ngathi inokukhutshwa ngaphezulu kwenyanga ukusukela ngoku. XDA Developers ingxelo kwinqaku elitsha abalifumeneyo Iprojekthi yoMthombo ovulekileyo we-Android , Oko kunokuthetha ukuba uGoogle usebenza kwinto entsha: inqaku lokusebenza le-hibernation ye-Android 12.
Iinguqulelo ezimbalwa zekhowudi, zingeniswe kwiProjekthi yoMthombo ovulekileyo, zibonisa ukuba uGoogle usenokuba usebenza kwinkqubo yokufihlwa kwii -apps. Inkqubo ivumela ii -apps ukuba zingene kwimeko ye-hibernation xa zingasetyenziswanga kwaye ziya kunceda ukukhulula ukugcinwa.
Kuncinci okwaziwayo malunga nenqaku elitsha okwangoku. Akucaci ukuba eli nqaku liza kusebenza njani kwaye iiapps ziya kufakwa njani kubusuku: nokuba oku kuya kugqitywa ngokuzenzekelayo, okanye abasebenzisi bazokwazi ukukhetha ngesandla ii -apps ze-hibernation. Ukongeza, asazi kwaye asazi indlela i-Android eya kuthi yazise ngayo abasebenzisi nge-hibernation, ukuba iyenzeka ngokuzenzekelayo.
Inqaku elingentla likwakhankanya ukwenziwa kokugcina: ayikacaci nokuba le nqubo ibandakanya uxinzelelo lweepakeji zeapp okanye ezinye izixhobo zokusebenza ukukhulula ukugcinwa kwifowuni yakho ye-Android.
Gcina ukhumbula ukuba iProjekhthi yoMthombo ovulekileyo we-Android liqonga apho abaphuhlisi banokungenisa amanqaku kunye nekhowudi yokuphucula i-Android, ke ayikaqinisekiswa okwangoku ukuba ingaba eli nqaku liya kuba yinxalenye yeGoogle 12 yeGoogle.
Sinokuva okungakumbi malunga neempawu ezizayo okanye izinto ezinokwenzeka ze-Android 12 kungekudala, ke hlala ubukele! Ngaba ucinga ukuba inqaku liyafuneka kwifowuni yakho ye-Android? Sixelele kwizimvo!
Ixabiso le-samsung galaxy amp 2
Inqaku elihambayo le-8 oreo
Ixabiso leApple iPhone SE 2020, umhla wokukhutshwa kunye nezinto ezichaziweyo
IGalaxy S8 kunye ne-apos; i-rediyo ye-FM isebenza njenge-charm, xela i-T-Mobile, iVerizon kunye ne-AT & T subs
Isiqalisi sikaGoogle ngoku esicinga ukuba sifile njengoko uGoogle esenza kungahambelani phantse nazo zonke izixhobo